जेजस्तो हास् शुभकामना
घुम्दैफिर्दै विजया दशमी २०७७ हामी नेपालीको घरआँगनमा आइसक्यो । केही मुठ्ठीभरका बाहेक आमनेपालीको दशैँ प्रायः अभाव, कष्ट, दुःख, चिन्तामा बित्ने गरेकै थियो, यसपाली त कोरोना कहरका कारण झन धेरै अप्ठेरोमा छन् । घरमा दुईछाक खानलाई नै छैन, दशैं कहाँबाट कसरी मनाउनु ? केही कालाबजारीया, सत्तासीन भ्रष्ट र तिनका दलालहरुका लागि दशैं रमाइलो हुनेछ । तर अधिकांश नेपालीको बिल्लिबाठ छ ।
लकडाउनका कारण चैत ११ देखि गरिखाने बर्गको जीवन कष्टकर छ । गरिखाने बर्ग मर्नु न बाँच्नुको दोसाँध्मा छन् । केही संस्था र मनकारी व्यक्तिले बाँडेर पेटपाल्नेहरुले धन्न प्राण बचाएका छन् । तिनका लागि दशैं के तिहार के ? कोरोना गरीवकै लागि महाप्रलय, महामारी हो । पहुँचवालाका लागि त कोरोना पनि कमाउने अवसर बन्यो । मास्क लगाउनु, हात धुनु, सेनेटाइजर दल्नु, भीडभाडमा नजानु, सकेसम्म घरबाट ननिस्कनु भन्ने प्रचारमात्र हो सरकारी प्रयास । १५ अर्वभन्दा बढी खर्च भएछ, कहाँ खर्च भयो, सरकार भन्न सक्दैन ।
यति ठूलो रकम खर्च भइसक्यो, बिरामीहरु आइसीयु, भेन्टिलेटर नपाएर मर्न थालेका छन् । कोरोना बिरामीमात्र होइन, अन्य बिरामीले समेत उपचार पाउन छाडेका छन् । यसैवीच हामी जनताका प्रतिनिधि भन्न रुचाउने सांसदहरुले दशैं पेश्की ३ करोड ७ लाख बुझेछन् । नारायणकाजीले बुझेका रहेनछन्, बुझेर गरीवलाई नदिनु पनि गैरजिम्मेवारी नै हो । बिडम्बना कस्तो ? वीर अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको छ, मर्मत गर्ने ३५ लाख छैन । यता सांसदहरु भने दशैँ पेस्की बुझ्छन् । यी सांसद हुन कि गैरजिम्मेवारहरु ? भन्नेहरु भन्छन्– सांसदले बुझेको पैसा कार्यकर्तालाई बितरण गर्नुहुन्छ रे । यो समय कार्यकर्तालाई पोस्ने समय हो कि अभरमा परेका आमनागरिकको जीवन रक्षा गर्ने समय हो ?
यो भनेको राज्यदोहन हो, अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । एकातिर यस्तो ब्रम्हलूट छ, अर्कोतिर भोकाहरु बाँडेको भात खान चउरमा लाइन लागेका देखिन्छन् । बाँडेको भात खाने लाइन दिनहुँ बढिरहेको छ । उता अस्पतालमा उपचार नपाएकाहरुको छटपटी छुट्टै छ । कसले बोल्ने ? सत्तापक्ष लुट्न व्यस्त छ, विपक्षी भाग खोजेर मौन छ । अख्तियारमा भएका पुराना फाइलमा फसिएला भनेर पनि विपक्षी सत्तापक्षजस्तो बनेको छ । बल्लतल्ल प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गर्जिएका छन्– यो सरकारले धेरै भ्रष्टाचार ग¥यो, अव दशैंतिहार लगत्तै सडक संघर्ष गर्छौं रे । चर्को भाषण गरेर विपक्षीको कर्तव्य पूरा हुँदैन । विपक्षीले आन्दोलन गर्ला र बाँचुला भनेर न रोगी कुर्न सक्छ, न भोकले शान्त्वना पाउँछ । त्यसो त सरकारले नै गठन गरेको छानबिन आयोगबाट डामिएका विष्णु पौडेललाइृ अर्थ मन्त्रालय सुम्पेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गरिसकेका छन् । राज्यको जग्गा छोराको नाममा पास गर्ने र फिर्ता गर्छु भनेर कानुनसँग खेलबाड गर्ने मन्त्रीले पहिलो दिन नै विश्व बैंकबाट २०करोड डलर ऋण लिने फाइल सदर गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खरिद गरिएका मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गनेृहरुले ऋण रकममा अझ कति ब्रम्हलूट गर्ने हुन् ? यस्तो बेलामा केही व्यक्तिहरु भने यतिबिघ्न भ्रष्टाचार हुँदा पनि केही गर्न सकिएन भनेर पिल्सिरहेका थिए । हो, केही भ्रष्टनेताहरुबाहेक आम नेपाली यसैगरी भित्रभित्रै मुर्मुरिएका छन् । तिनलाई एकजुट गराएर शक्तिशाली बनाइदिने कसले ? नेतृत्व लिनसक्ने जनताभक्त को छ ?
जनता आक्रोसित छन्, भ्रष्टाचारी अत्याचारीलाई लखेट्न जनता तैयार छन् । जनतालाई एकजुट पार्ने शक्तिको अभावमा आँधी अघिको शान्तिजस्तो छ मुलुक । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुरामले देउवा, ओली र प्रचण्डले बुढीगण्डकीमा मिलेर ९ अर्व खाएको खुलासा गरिदिए । प्रधानमन्त्री यो सब भ्रम भन्छन्, बाबुराम मसँग प्रमाण छ भनिरहेका छन् । अख्तियार तमासा हेरेर बसिरहेको छ । प्रमाण खोई, कारवाही गर्छौंसम्म पनि भन्न नसक्ने यस्तो सेतो हात्ती अख्तियार चाहियो किन ? यो अख्तियार हो कि कार्यपालिकाको हनुमान हो ? तसर्थ अव केही न केही अर्थात यी भ्रष्ट, अनैतिक, निष्ठाहीन, लुटेरा, जनतामाराहरुको उपचार गर्न श्री नवदुर्गा भवानीले हामी सबै नेपालीहरुलाई सद्बुद्धि, ताकत, हिम्मत दिउन् । बिजयादशमी २०७७ को शुभकामना ।